သရုပ်ဆောင် ဒိန်းဒေါင်၏ သမီး ဒိန်းပိုပိုဒေါင်၏ တိုင်ကြားချက်အရ ဗေဒင်ဆရာ အောင်ချစ်ပိုအား ပု?? - Yangon Media Group
သရုပ်ဆောင် ဒိန်းဒေါင်၏ သမီး ဒိန်းပိုပိုဒေါင်၏ တိုင်ကြားချက်အရ ဗေဒင်ဆရာ အောင်ချစ်ပိုအား ပု??
ဗေဒင်ဆရာအောင်ချစ်ပိုအား အရေးယူပေးရန် သရုပ်ဆောင် ဒိန်းဒေါင်၏ သမီးဖြစ်သူ ဒိန်းပိုပိုဒေါင်၏ တိုင်ကြားမှုကို စမ်းချောင်းရဲစခန်းက ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၅၄ (အမျိုးသမီးအပေါ် ကာယိနြေ္ဒပျက်စီးစေရန်အကြံဖြင့် လက်ရောက်မှုကျူးလွန်ခြင်း)ပုဒ်မ ၅ဝ၆ (ခြိမ်းခြောက်မှု)တို့ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
”ရှင်းရှင်းပြောရရင် ညီမအဖေရဲ့သိက္ခာမှမထောက်၊ မျက်နှာမှမထောက်ဘဲနဲ့ ဒီလောက်အထိ ပြောတယ်ဆိုကတည်းက ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်အနေနဲ့ ဘယ်သူမှားတယ်၊ မှန်တယ်ဆိုတာ စဉ်းစားမိမှာပဲလေ။ ဆယ်လီဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို ညီမကလက်မခံဘူး။ သူ့ကြောင့်မှ ညီမဆယ်လီဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ ညီမက အစကတည်းကဆယ်လီပဲ။ ညီမကြောင့်သာ အခုအချိန်မှာ သူကလူသိလာတာလို့ ညီမပြောချင်တယ်”ဟု သရုပ်ဆောင် ဒိန်းပိုပိုဒေါင်က ပြောသည်။ ဗေဒင်ဆရာအောင်ချစ်ပိုမှ သူ၏အမည်ကို လွန်ခဲ့သည့်ခြောက်နှစ်က မကြားဖူးဘူးဟု ဆိုထားသည့်အပေါ် ဒိန်းပိုပိုဒေါင်က ယင်းအချိန်က တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်းသူတစ်ဦး သာဖြစ်သောကြောင့် အနုပညာလောကသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းနှင့် နာမည် အရင်းနှင့်သာ သွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယင်းက ဆက်လက်ရှင်းပြသည်။
ထပ်မံလိမ်နေမည်ဆိုပါက သူ့အနေဖြင့် အမှန်တကယ် တကယ်တတ်သိကျွမ်းကျင် နားလည်သည့်ရှေ့နေများခေါ်၍ ထောင်ကျသည်အထိ ထိုက်သင့်သည့်ပြစ်ဒဏ်ကျခံစေရန် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။ ”ညီမသွားတုန်းကတော့ သူ့ဆီကိုလာမေးတာ တစ်ယောက်တောင်မရှိဘူး။ ညီမ တို့လိုမသိတဲ့မိန်းကလေးတွေလောက်ပဲတစ်ခါလာမယ်။ နောက်မလာတော့ဘူး။ သူ့ဆီမှာ ညီမတို့တန်းစီရတာ၊ ဘိုကင်ယူရတာ အယောက်သုံးလေးဆယ်တွေဆိုတာ လျှောက်ပြော နေတာ။ မှန်လုံကာထားတယ်ဆိုတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ အထဲကနေ အပြင်ကိုပဲ မြင်ရတာ၊ အပြင်ကနေ အထဲကို မမြင်ရဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်နှစ်တုန်းကတော့ အဲဒီလိုမျိုး၊ အခုပြဿနာ တွေဖြစ်မှ မှန်ကို ပြောင်းတပ်ချင်လဲ တပ်လို့ရတာပဲ။ အဲဒါတွေက လှည့်ကွက်တွေပါ”ဟု ၎င်းမှ ထပ်မံပြောသည်။
မင်္ဂလာပွဲမှာ လက်ဖွဲ့ငွေ လက်မခံခဲ့တဲ့ ထယ်ယန်းနဲ့ မင်ဟိုရင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ
ထိုင်ဝမ်တွင် မြေငလျင် လှုပ်ခတ်၊ လူလေးဦး သေဆုံးပြီး ၂ဝဝ ကျော် ဒဏ်ရာရ
ရခိုင်ရိုးမ တောစပ်တွင် ဘင်္ဂါလီ ၁ဝ ဦးဖမ်းမိ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကို ပြည်သူများမှ ထောက်ခံပွဲ တောင်ငူဒေသခံ တစ်သောင်းခွဲခန်?
စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အားစိုက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပ??